Khudbadii madaxweyne Faroole uu ka jeediyey magaalada London AUDIO+SAWIRO – SBC
Khudbadii madaxweyne Faroole uu ka jeediyey magaalada London AUDIO+SAWIRO
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa maalmihii la soo dhaafay socdaal ku joogay magaalada London ee caasimada UK, isagoo kulamo kala duwan la yeeshay masuuliyiin ka tirsan xukuumada Britain, waxaa kale oo uu ka qayb galey xaflado lagu soo dhaweynayey isaga iyo wafdigiisa.
Warbixintan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa khudbadii uu ka jeediyey xaflad balaaran oo uu ka qayb galey Madaxweynuhu, inagoo sidoo kale idiin soo gudbin doona khudbadaasi oo muuqaal ah wararka dambe insha ALAAH.
Linka AUDIO-ha hoose ka dhageyso khudbada maqalka ah ee C/raxmaan Faroole.
DAAWO SAWIRADA XAFLADA
Salan sare dhaman asxabta sharafta leh ee website ka allsbc iyo idacada .anigo ah khadro maxamad c/dule kana mid ah dadka aad u daneya allsbc wad mahadsantihin
Asc Dhammaan dadweynaha reer puntland meel kasta oo ay joogaan waxaan kula dardaarmayaa inay ka qaaybqaataan dhismaha iyo kor uqaadida Aayaha puntland .
Soo dhaweynta Madaxweynaha puntland Dr:C/raxmaan Sheikh Mohamed Mahud Faroole aad ayaan ugu faraxsanahay .
Madaxwayne faroole wuu fashilmay xagee ka keenay in uu yiraahdo Dadka Masaakiinta oo $100 dollar qaata in uu yiraahdo hala gajaro maxaayeelay waxay naga caayaan merheradaha taasi maahan hadal madaxwayne ee waa kalmad dhawacisa sharafta faroole hana ka tanaasulo dhibaatadda u ku hayo umadda reer Puntland